Zambia caution truck drivers not to travel to South Africa on September 2 - Makamba Online
Home » Life » Travel » Zambia caution truck drivers not to travel to South Africa on September 2
Zambia’s High Commission in Pretoria on Monday issued a travel advisory cautioning its citizens in the trucking business to avoid travelling to South Africa on September 2, amidst threats of violence.
The high commission’s Naomi Nyawali said reports have been received of some Zambian truck drivers being threatened with violence ahead of a planned nationwide work stoppage by their unhappy South African counterparts.
“It is with this background that Zambia’s High Commission would like to advise all Zambian truck drivers who are scheduled to travel to South Africa on the mentioned date not to do so until security is guaranteed,” said Nyawali.
“The mission would also want to advise Zambian Truck drivers who will enter or would be working in South Africa on the 2nd of September 2019 to park their trucks in safe and secure designated places in order avoid loss of life and property. The mission has in the past engaged Pretoria’s department of international relations on the safety of Zambian truck drivers, and was assured of tight security measures that the South African government was putting in place.”
Zambia caution truck drivers not to travel to South Africa on September 2 Reviewed by Gesture on Aug 28 . Zambia's High Commission in Pretoria on Monday issued a travel advisory cautioning its citizens in the trucking business to avoid travelling to South Africa on Zambia's High Commission in Pretoria on Monday issued a travel advisory cautioning its citizens in the trucking business to avoid travelling to South Africa on Rating: 0
The Gambia’s first president,...Bafana Bafana assigns new manager